Times Of Nepali » यौन सम्पर्क गर्ने बेस्ट समय कुन हो ? अध्ययनले यसो भन्छ जानी राखौ
यौन सम्पर्क गर्ने बेस्ट समय कुन हो ? अध्ययनले यसो भन्छ जानी राखौ
यदि तपाईंसँग सोधियोस् कि सेक्स गर्ने बेस्ट समय कुन हो भने सायद तपाईंसँग यसको कुनै ठोस उत्तर नहोला। तर, हालै गरिएको एक अध्ययन अनुसार मर्निंग सेक्सलाई राम्रो मानिएको छ। किनकी बिहानको समय सेक्स गर्नाले मुटु स्वास्थ्य राम्रो हुनुका साथै शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्ति पनि बढाउँछ। आयुर्वेदका अनुसार सेक्सको राम्रो आनन्द तबमात्र आउँछ जब दुबै पार्टनर पूर्ण रुपले रिल्याक्स हुन्छन।
उसो त सामान्यतया हेर्ने हो भने सेक्सका लागि मानिसले रातिको समयलाई चुन्ने गर्छन् । तर, मर्निंग सेक्सको फाइदाबारे जानेर तपाईंपनि बिहानको समय नै सेक्स गर्न रुचाउनुहुन्छ होला ।
दिनभरको थकान र कामको शेड्यूलपछि राति सेक्सको बारेमा सोच्नु समस्या नै हुन सक्छ । त्यस कारण रातिको समय निद्रा पुरा गरेर बिहान फ्रेश मूडमा तपाईं एक सेशन ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ । अध्ययनका अनुसार राम्रो निद्रा लिबिडोका लागि निकै आवश्यक हुन्छ ।
युनिर्भसिटि अफ टेक्सासले गरेको एक अध्ययन अनुसार सेक्सको क्रममा अक्सिटसिन हार्माेन निस्कन्छ। जसले तपाईंको मूडलाई राम्रो बनाउने काम गर्छ। अक्सिटसिन पार्टनरसँग तपाईंको निकटता बढाउने काम पनि गर्छ। यस अवस्थामा तपाईंले पुरै दिन आफ्नो पार्टनरसँग कनेक्ट भएको महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
बिहान पुरुष हुन्छन् बढि उत्तेजित
पुरुष रातभर आरामपछि बिहान बढि उत्तेजित हुने गर्छन् । बिहानको समय उनको टेस्टोस्टेरोनको मात्रा उच्च हुन्छ । यस्तोमा मर्निंग सेक्स उनका लागि बढि आनन्ददायी हुने गर्छ । बिहानको बोरिंग एक्सर्साइजलाई गरौं बाईबाई एक्सर्साइज गर्नमा यदि तपाईंलाई अल्छी लाग्छ भने मर्निंग सेक्सले वर्कआउटलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ । रिपोर्ट्सका अनुसार सेक्स गर्दा एक घन्टामा ३०० क्यालोरि बर्न हुन्छ ।
यो हो बेस्ट समय अध्ययनमा सहभागि मानिसहरुले सेक्सका लागि बेस्ट समय बिहान साढे ७ लाई बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार बिहान सेक्स गर्नाले उनको स्ट्रेस कम हुने र दिनभर मूड पनि राम्रो हुने गर्छ ।
प्रकाशित मिति २९ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०१:१८